Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii Czech Republic, Dominican Republic iyo South Korea
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii Czech Republic, Dominican Republic iyo South Korea
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Wararka Dominican Republic • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ka dib markii la falanqeeyay oo la tixgaliyay xaaladda cudurrada faafa ee waddamada qaarkood, go'aanka waxaa la qaatay in xayiraadaha laga qaado duullimaadyada caalamiga ah ee joogtada ah iyo kuwa aan caadiga ahayn (charter) ee garoomada diyaaradaha ee Ruushka illaa Dominican Republic, South Korea iyo Czech Republic laga bilaabo Ogosto 27, 2021.
Ruushka ayaa soo afjari doona xannibaadaha lagu soo rogay duulimaadyada ganacsi iyo kuwa jadwalka ee jadwalka ah ee ka socda Xiriirka Ruushka kuna sii jeedda Dominican Republic, Czech Republic iyo Kuuriyada Koonfureed 27-ka Ogosto, xarunta dhibaatada ka-hortagga coronavirus-ka ee dalka ayaa lagu sheegay bayaan maanta.
Ka dib markii la falanqeeyay oo la tixgeliyey xaaladda cudurrada faafa ee waddamada qaarkood, go'aanka waxaa la qaatay in xayiraadaha laga qaado duullimaadyada caalamiga ah ee joogtada ah iyo kuwa aan caadiga ahayn (charter) ee garoomada diyaaradaha Ruushka illaa Dominican Republic, South Korea iyo Czech Republic laga bilaabo Ogosto 27, 2021 , ”Ayaa lagu yiri qoraalka.
Intaa waxaa sii dheer, duullimaadyada caalamiga ah ee ka imanaya Madaarka Caalamiga ah ee Surgut waxay dib u bilaaban doonaan 27ka Ogosto.
Sida laga soo xigtay xarunta dhibaatada ka-hortagga coronavirus-ka Ruushka, tirada duullimaadyada joogtada ah ee ka imanaya Ruushka ee tagaya Hungary, Qubrus, Kyrgyzstan iyo Tajikistan ayaa la kordhin doonaa laga bilaabo 27-ka Ogosto.
Tirada Moscow-Budapest duullimaadyada ayaa la kordhin doonaa afar ilaa toddoba toddobaadkii, halka hal duulimaad toddobaadkii loo oggolaan doono dhowr magaalo oo kale. Tirada duulimaadyada ka imanaya Moscow taga Larnaca iyo Paphos ee Qubrus ayaa sidoo kale gaari doona toddoba, halka magaalooyinka kale ee Ruushka ay toddobaadkiiba yeelan doonaan afar duulimaad.
Toddoba duulimaad toddobaadkii ayaa laga duuli doonaa Moscow ilaa Bishkek iyo Dushanbe. Intaa waxaa dheer, dhowr magaalo oo Ruush ah ayaa loo oggolaan doonaa inay yeeshaan hal duulimaad toddobaadkiiba caasimadda Kyrgyz, caasimadda Tajik, Khujand iyo Kulob.
Safarka hawada ee Hungary iyo Qubrus ayaa dib loo soo celiyay bishii Juun ka dib markii loo gooyay masiibada awgeed. Duulimaadyada u dhexeeya Ruushka iyo Tajikistan ayaa dib u bilaabmay bishii Abriil halka Kyrgyzstan ay dib ugu laabatay 2020.